Gaafow oo beeniyay wararka sheegaya inuu xoog ku heysto dhul uusan laheyn – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com-Taliyaha hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Generaal C/llaahi Gaafow Maxamuud ayaa beeniyay warar sheegayay inuu xoog ku heysto guri uusan laheyn, kadib markii loo keediyay eedeymo la soo dhigay barta Youtube-ka.
Taliyaha ayaa sheegay in dhulka lagu eedeeyay inuu degan yahay uu yahay mid banaan oo deris la ah hoygiisa islamarkaana aanay jirin hay’ad ama shaqsi degan waxaa uu xusay in dhulkan lagu eedeeyay uu yahay mid uu leeyahay nin u dhashay dalka Taklyaaniga hase yeeshee ay dhowr jeer u yimaadeen dad fara badan oo mid weliba sheeganayo milkiiyada dhulkaasi banaan.
“Dhulkan markiisii hore waxa deganaan jiray nin u dhashay wadanka Talyaaniga oo milkiyadiisa leh hase yeeshee intii lagu guda jiray burburkii waxaa uu noqday meel burbursan oo qashinka lagu shubo dad badan ayaana sheegta ilaa hadda inay leeyihiin mana garan karno cida saxda ah iyo kuwa doonaya inay boobaan hase yeeshee waxaa jira hay’ado garsoor oo dalku leeyhay kuwaasoo ay la xiriiri karto cidii dacwad ii heysata” ayuu yiri Generaal Gaafow.
Sidoo kale taliyaha hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha C/lllaahi Gaafow ayaa cadeeyay in isagu uusan sina ugu lug laheyn dhulkaasi balse uu ka ag-dhow yahay oo kaliy ah hoygiisa waxaase uu ku tilmamaay sababta loogu eedeeyay inay tahay mid ay siyaasadi ka dambeyso oo aan loo baahneyn in lagula kaco shaqsi haya mas’uuliyad dowladeed.
“Ilaa 3 haween ah oo mid weliba ay sheeganeyso inay xaaskiisa tahay ninka dhulkan leh ee u dhashay wadanka talyaaniga ayaa dhowr jeer yimid dhulkan marka eedeynta la ii jeediyay waa mid dano gaar ah laga leeyahay oo lagu doonayo in lagu xalaaleysto dhulka ninkaasi oo isagu aan dalka iman tan iyo markii ay dowladii dhacday”ayuu yiri Generaal Gaafow.
Generaal Gaafow ayaa sheegay in dowladda Talyaaniga ay safaarad ku leedahay Soomaaliya, isla markaana muwaadinka leh dhulkan hadii uu dacwo qabo uu dacwoon karo.
“Dowlada Talyaaniga safaarad ayey ku leedahay Soomaaliya hadii muwaadinkii lahaa dhulkan uu dacwo qabo wuu dacwoon karaa safaaradiisa isaga oo kaashanaya dalkuna waxa uu leeyahay hay’ado garsoor oo awood leh marka ma ahan in dad mas’uuliyiin ah loo jeediyo eedeyn noocaan ah sumacad dil ah”ayuu hadalkiisa ku sii daray
Generaalku waxa uu xusay in qofkii dhul leh looga baahanyahay inuu la yimaado cadeymihiisa hase yeeshee qof milkiile ah website ama Youtube ma adeegsado, isagoo yiri “Nin sharci ku dhashay sharco ma diido”
Yuusuf Cali Diini oo ah nin caan ka ah deegaanka uu dhulkani ku yaalo isla markaana goobjoog ahaa xiliyadii dhulkan la cabiray ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dhul la cabiray nus qarni ka hor oo decoment leh in la isku eedeeyo isagoo tilmaamay in dhulkan banaan oo 1 boos ah uu leeyahay nin talyaani ah oo ka gatay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo Caanood Saadaq dhulkaasi oo ku dhegan hooyga Generaal Gaafow.
Sidoo kale waxaa uu cadeeyay in dhulka ay ku dooday haweeneyda lagu magacaabo Ifraax uu yahay mid banaan oo uu lahaa ninkan talyaaniga ah oo aysan jirin cid degan.
“Waxaan cadeynayaa in dhulka 1-ka boos ah ee talyaanigu leeyhaay inuu yahay mid banaan oo ka agdhow hooyga generaalka waxaana ku tilmaami karaa hadalada aan maqlay in dadka hadlay ay maqleen warar ku tiri kuteen ah oo aan xaqiiqda u dhoweyn cid kastana wey imaan karaan si ay u xaqiijiyana in aan la dhisan dhulkaasi banaan”ayuu yiri Yuusuf Cali Diini.
Si kastaba ha ahaatee horay ayaa waxaa Barta Youtube-ka iyo websiteyada qaar loogu qoray in guri uu leeyahay nin u dhashay dalka talyaaniga ay xaaskiisu ku eedeysay Generaal Gaafow inuu dhistay guri ay lahaayeen iyadoo eedeyntaasi kadibna ay soo baxeen wararaka sheegaya inaan la dhisan oo dhulkaasi banaan yahay.
Somalia:Several journalists under arrest in Buhod